Asịrị The New iPhone 6: Ụbọchị mwepụta, Images, Ahịa, atụmatụ, wdg
> Resource> iPhone> asịrị The New iPhone 6: Ụbọchị mwepụta, Pictures, Ahịa, atụmatụ, wdg
The iPhone 5S emesịala bịarutere. Ugbu a ọ bụ oge anya n'ihu na-esonụ otu - iPhone 6. Dị nnọọ ka ụbọchị tupu ntọhapụ nke gara aga iPhones, ndị amụma mgbe niile 'maara' nju banyere ọzọ iPhone. Asịrị banyere iPhone 6 e n'ọtụtụ ebe na-agbasa. N'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, Apple Fans bụ nkọ na ya ma na-achọta otu ụzọ na-onwe ha aka. Oge a, ka ego ihe ha na-ekwu ma ọ bụ chọrọ banyere ọzọ iPhone 6.
Rumo 1: The Ụbọchị mwepụta nke iPhone 6
rumo 2: Atụmatụ na ụdịdị nke iPhone 6
rumo 3: The Ahịa nke iPhone 6
rumo 4: Pictures nke iPhone 6 (Concept Designs)
Atụmatụ: Naghachi furu efu data site na iPhone
Ọ ga-abụ n'oge okpomọkụ ma ọ bụ daa nke 2014. O doro anya na, Apple mgbe niile ọkwa ntọhapụ nke ọhụrụ na ngwaahịa n'oge a oge nke afọ ọ bụla. Ya mere, a ga-enwe ihe ọ bụla mberede n'afọ ọzọ.
Dị ka atụmatụ nke ọhụrụ iPhone 6, onye ọ bụla na-ekwu banyere onwe ya chọrọ, dị ka a ibu ihuenyo, wuru na-eze floss dispenser, a batrị na-ewe awa 12, dị na-arụ ọrụ a kọmputa elekere mgbaaka na a telivishọn set, na na.
E nwere 10 egbu egbu atụmatụ na-atụ anya na ọhụrụ iPhone 6:
1. Ibu Ngosipụta
2. Safaya-echebe n'ihu iko
3. Unlimited anyanwụ ike maka iPhone 6
4. Ikuku odori usoro
5. Ogologo ndụ batrị
6. 128 GB esịtidem nchekwa
7. Dị iche iche ihuenyo nha na Agba Nhọrọ
8. Enwekwukwa Indoor nkewa Technology
9. BBM-dị ka Izi ozi ozugbo
10. Mkpịsị aka ebipụta nyocha
Lee ndị zuru ụdịdị maka iPhone 6 na-akpọghị aha iPhone si NPD Ngosipụta Search akụkọ:
- 4.7-anụ ọhịa ngosi na 1280 × 720 mkpebi, 312 ppi
- 5.7-anụ ọhịa ngosi na 1920 × 1080 mkpebi, 386 ppi
Apple-emekarị tọhapụrụ ya ọhụrụ ụdị n'otu price dị ka ochie omume. Oge a, ma ọ bụrụ na Apple akuko ya ịnye ọnụahịa atụmatụ, price nke ọhụrụ iPhone 6 kwesịrị ịbụ (Gbanyụọ-nkwekọrịta):
Ugbu a, ka ego otú ọhụrụ iPhone 6 ga-ele anya dị ka. Ọzọ ụfọdụ "leaked photos" nke unveiling nke iPhone 6.
Atụmatụ: iPhone data mgbake software
Ke akpatre, nwere ike ikwu ihe iPhone data mgbake omume niile iPhone ọrụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS, ụwa mbụ iPhone data mgbake software, ekwe ka ị naghachi ehichapụ photos, videos, kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ si iPhone 5C / 5S / 5 / 4S / 4 / 3GS. Ịnwere ike ihuchalu niile data tupu mgbake. Nweta ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a na-agbalị mbụ.
Lelee nseta ihuenyo nke Wondershare Dr.Fone maka iOS n'okpuru:
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ndị ọzọ oké ọmụma banyere ọhụrụ a iPhone 6, biko ịkọrọ ya anyị na ndị ikwu n'okpuru.
Naghachi iPhone ozi: Nke a ndu-egosi gị otú iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi ehichapụ foto na iPhone: Isiokwu a na-egosi gị otú ị naghachi ehichapụ foto na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi iPhone iMessages: Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị enweghị a ndabere na iPhone na 3 nzọụkwụ ala. iPhone Obere Asịrị: Ga Apple hapụ ihe iPhone Obere, ihe ga-iPhone Obere dị ka, na ole ga-Apple price ọhụrụ iPhone Obere? All azịza na-ahụ. Samsung VS Apple: Apple-achọ $ 380 nde si Samsung maka edegharị ya isi Ikike nchọpụta Kemịkalụ, mgbe Samsung-ekwu na ọ bụ nanị ẹsiode $ 52 nde. Ihe N'ihi ga-abụ emecha? Weghara a nseta ihuenyo na Mac OS X: A nchịkọta nke niile ụzọ na i nwere ike iji weghara meziri na gị MacBook, MacBook Pro na Mac laptọọpụ.